Axmed Madoobe: “Farmaajo Dalka waxa uu u wadaa God dheer”. - Awdinle Online
Axmed Madoobe: “Farmaajo Dalka waxa uu u wadaa God dheer”.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe oo jeediyay Khudbad uu ku faah-faahiyay xaaladda kala guurka dalka, Shirkii wada-xaajoodka Doorashooyinka, qorshaha Madaxtooyada, go’aanka Golaha Shacabka & xogta uu ka og yahay heerarka loosoo maray muddo dheereysiga ayaa eedeyn kala dul dhacay Madaxweynaha mudo xileedkiisu dhammaaday ee Maxmaed Cabdullaahi Farmaajo.
Axmed ayaa ugu horreyn ka hadlay sababta keentay in heshiiskii 17-kii September 2020 laga door-bido doorasho qof & Cod ah, 13-Shir ayuu tilmaamay in la isugu yimid si xal loo gaaro balse laga gudbi waayay arrimaha Amniga, Aftida Dastuurka, Somaliland oo budo gooni u tuman noqotay & ka gudubka awood qaybsiga beelaha ee Hay’adaha Dowladda 4.5-ta.
Madaxweyne Axmed Madoobe ayaa go’aanka Baarlamaanka ee 12-kii April 2021 ku tilmaamay mid aan sharci ahayn maadaama muddo xileedkoodu dhammaaday isla markaana hal Aqal oo keliya uusan go’aan gaari karin, balse tallaabada Golaha Shacabka waxa uu ku sifeeyay mid aan dan u ahayn Dalka sida uu hadalka u dhigay.
“Dhibaatooyinka uu ka hadlayo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxba kama jiraan, waxa uu Soomaaliya ku ridayaa god dheer, haddii aan maanta la iska qaban dalka dib ayuu u noqonayaa, Jidadka ayuu ka xiray Dadka Muqdisho waxaana isii dheer habeen weliba cabsi, Doorasho sharaf leh oo xor & xalaal ah ayuu shalay ku yimid, mana wanaagsana in uu ku daydo Efwarki & meelo kale” Sidaasi waxaa yiri Axmed Madoobe.
Waxa uu usoo jeediyay Madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday in uu qabto Doorasho lamid ah tii lagu soo doortay 2017, isla markaana uu meel iska dhigo u muuqashada kursiga oo keliya waa sida uu hadalka u dhigay.
Previous articleSheekh Shariif & Taliyaha xoogga oo kulan xasaasi ah yeeshay
Next articleBooliska Soomaaliya oo dad u qabtay dilka Guddoomiyihii degmada Xamar jajab